Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Ku Fashilmay Meel Marinta Go’aankiisii Qudus Ku Aadanaa.
Trump oo Ku Fashilmay Meel Marinta Go’aankiisii Qudus Ku Aadanaa.
Dalka Togo waa dalka kaliya ah ee Afrikan ah ee codkiisa ku taageeray go’aankii Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa’iil.
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey (QM) ayaa cod u qaaday go’aan lagu dalbanayay in mareykanka uu ka laabto go’aanka Qudus. Dalal badan oo Afrika ku yaalla sida Koonfur Afrika, iyo Nigeria waxay codkooda ku taageereen qaraarka ka dhanka ah Mareykanka. Sidoo kale Ugandha, Rwanda iyo South Sudan ayaa ka gaabsaday qaraarka in ay u codeeyaan.
Arbacadii, Trump wuxuu ku caga-jugleeyay in kaalmada dhaqaalaha uu ka jari doono dalkii ka hor yimaadda go’aankiisa. Sidoo kale, safiirkiisa QM u qaabilsan Maraykanka Nikki Haley waxay sheegtay in Maraykanka “uu qoran doono magacyada dalalka ka hor yimaada, si dhowna u eegayo sida waddamada ay u codeynayaan.
Dalka Botswana oo saaxiib wanaagsan la ah Maraykanka waxay u codeysay qaraarka ka dhanka ah Trump, iyadoo iska indha tirtay hanjadaadda Maraykanka, waxayna sheegtay in aan loo cagajugleyn karin. Togo waxay ka mid tahay sagaalka dal ee kaliya ee diiday qaraarka QM. Dalalka kale waxaa ka mid ah Israel, Guatemala, Honduras, Jasiiradaha Marshall, Micronesia, Nauru, Palau iyo Mareykanka.
Golaha loo dhan yahay ee QM ayaa si wayn u taageeray qaraarka Maraykanka ugu baaqaya in uu ka laabto in uu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa’iil. Warka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in go’aankasta oo laga qaatay Qudus uu yahay mid aan waxba ka jirin, ayna waajib tahay in laga laabto. Qaraarkan oo dhaqangalintiisu aysan qasab ahayn waxaa meelmariyay 128 dal, waxaa ka aamusay 35 dal waxaana ka soo horjeedsaday 9 dal.
Arrintan ayaa timid ka dib markii madaxweyne Trump uu ku goodiyay in uu kaalmada dhaqaale ka jari doono dalalka taageera qaraarkaas. Dalalka aan codkooda dhiibaninna waxaa ka mid ah Canada iyo Mexico. Dalalka taageeray oo ay ku jiraan xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee QM waxaa ka mid ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo UK iyo wali sidoo kale dalalka Muslimiinta ah ee xulafada la ah Maraykanka.